Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iinqwelo moya zaseTurkey zifuna ukwandisa ukhenketho ePalestine
Airlines • isikhululo • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • iindaba • IPalestine Breaking News • komzila Ngoku • Iindaba zaseTurkey zokuPhula
Umongameli wase-Turkey u-Recep Tayyip Erdogan uye wakhuthaza amaSilamsi ngakumbi ukuba atyelele i-Jerusalem, ngakumbi xa i-US ihambisa i-ambassy yayo esixekweni.
Usekela-Mongameli weeNqwelo moya waseTurkey u-Muhammed Fatih Durmaz udibene noMphathiswa weGunya lasePalestine lezoKhenketho kunye nezinto zakudala uRula Ma'ayah ngoMgqibelo eBhetelehem.
Ngokwe-arhente yeendaba yaseTurkey i-Anadolu, "Iinqwelomoya zaseTurkey zikulungele ukusebenzisana ukukhulisa ukhenketho ePalestine."
I-Ankara ngumxhasi wabantu basePalestine kwaye ikwanobudlelwane neHamas eGaza. I-Turkey ibingomnye wabagxeki abaphambili bokwamkelwa kwe-Yerusalem yi-Jerusalem kulo nyaka uphelileyo.
Ngokweengxelo, uDurmaz ubonakalise umdla kwintsebenziswano "ekuziseni abakhenkethi abaninzi ePalestine." Ngaphezulu kwe-130,000 yabemi baseTurkey abatyelele indawo elawulwa liGunya lasePalestine kunyaka ophelileyo, itsho ingxelo. Iindaba ze-Amonri zixele ukuba u-Ma'ayah uxoxe ngokubaluleka kobudlelwane phakathi kweTurkey nePalestina kunye "nokwazi" kweTurkey ngemicimbi yasePalestine.
Ezinye iingxelo ziqaphele ukuba le yayiyindawo "yeqhinga lokuya" eTurkey kwaye baninzi kakhulu amandla aba bakhenkethi. I-Turkey ibaluleke ngakumbi kule minyaka idlulileyo kule ndawo yabantu basePalestine abanokhenketho oluququzelelweyo kunye nabathunywa.
Iphephandaba laseHürriyet labika ukuba olu tyelelo lwaluyinxalenye yelinge elibanzi laseTurkey lokukhuthaza ukhenketho eJordani, nalapho iDurmaz ibibambe khona intlanganiso nabantu baseJordani. Imithombo yeendaba yaseTurkey inemincili, ngakumbi amajelo osasazo aseburhulumenteni afana no-Yena Şafak. Inxalenye yenkxaso ebanzi yemicimbi yasePalestine kwimithombo yeendaba zaseTurkey nakuluntu.
kuzisa ngabemi intsebenziswano abagxeki a bathunywa umzamo i-ambassy khuthazwa eGaza IHamas kubanjwe ukubaluleka umdla nemiba eYerusalem Jordan ukukhanya LOT ezinkulu eendaba umhlangano wahlangana ngumphathiswa Umphathiswa Wezokhenketho uhambisa amaSilamsi Iphephandaba Palestina Palestina ngakumbi Ezinokwenzeka Lungile yakutshanje ukuqonda ubudlelwane umbiko umbiko Iingxelo ukuhlonipha kwiintengiso buchule ukhenketho ikarikuni Oosaziwayo Airlines Turkish vice umsekelwa Mongameli tyelela